Nezvedu - Hebei Minshang hwokushandura zvinhu zvipenyu Co., Ltd.
lightningchemical Co., Ltd ndeimwe inogadzira uye yekutengesa seimwe yemakambani epamhepo epamhepo akabatana-emabhizimusi emakemikari, inovhara nharaunda yemahekita 95, kuvakwa kwechirimwa kuchave GMP zviyero, nharaunda fekitori yakachena uye yakachena. zvine hungwaru dhizaini, iine hombe uye yepakati-saizi dhizaini yekugadzira uye shopu inogadziriswazve. Iyo yakagadzirirwa neapamberi michina yemhando yekuongorora uye yekutsvagisa nzvimbo. Izvo zvigadzirwa zvese zvemhando yepamusoro uye zvehunyanzvi zvemukati zvasvika kune epamba nhanho yepamusoro.
Kambani yedu yakaisa mari yakawanda uye simba rekutsvagisa nekusimudzira kusangana nezvinodiwa mumusika makemikari akanaka, bio-chemakemikari, mishonga yekumiririra zvakare zvimwe zvigadzirwa zvitsva, hunyanzvi hutsva. Yakakwira-chikamu chikamu chekutsvagisa uye chekuvandudza timu, yekutanga-kirasi marabhoritari michina, yakanaka mamiriro kuverengera kutsvagisa nekusimudzira R & D simba, ikozvino kugadzirwa kwezvigadzirwa.
Kutsvagisa kwekambani yedu uye budiriro zvasvika mudzimba zvemberi nhanho. Kunyangwe zvimwe zvigadzirwa zvakasvika padanho repasi rose repamberi.
Tiri Hebei minshang hwokushandura zvinhu zvipenyu co. LTD., Inonyanya kubata mune zvemishonga intermediates uye akasiyana makemikari Isu tiri vagadziri uye tine yedu fekitori.
Zvigadzirwa & UsageMishonga inopindirana, makemikari, zvinowedzerwa, pigmentsPharmaceutical giredhi, maindasitiri giredhi, chikafu giredhi, zuva nezuva zvigadzirwa zvigadzirwaWe ine yakanyoreswa guta guru reRMB mamirioni yuan. zvigadzirwa zvakapararira pamusoro penyika dzinopfuura makumi matatu pasirese, USA, Netherlands, Poland, Canada, England, Italy, India, Columbia zvichingodaro.
Isu tinoshanda pamwe neshamwari pasirese kusimudzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mitengo inonzwisisika, kutakura kwakachengeteka uye kunoshanda. Chigadzirwa chinogona kurairwa kubva pamamirigiramu kusvika kumatoni. Sangana nekutengwa kwevatengi vatsva nevekare vatengi.Tiri vagadziri vanogona kukupa iwe inonyanya kukwikwidza mitengo uye yekukurumidza uye yakachengeteka kutakura, yakanakisa mhando sevhisi.Kana iwe uchifarira isu, ndokumbira undibate.
Isu tinovimbisa kuti pasuru yako ichapfuura 100% kuburikidza neUS, UK, Australia, Netherlands, Canada, France, Germany, Spain, Belgium, Sweden, Poland, Russian, Ukraine, Kazakhstan, Czech Republic, Slovakia, Portugal nevamwe vazhinji. kuva nevatakuri vekutakura zvinhu munyika / matunhu mazhinji, uye kambani yedu yekubvisa tsika inojekesa mapasuru ako pasina nyaya dzechivanhu, dzimwe nguva kunyangwe 1000 kg. Basa repasuo nesuo. Ita shuwa kuti iwe unogamuchira 100% yezvinhu. Rega iwe uve neruzivo rwakanaka rweyedu yakasimba yekutakura zvinhu.
Hupenyu hupenyu. Hunhu ndicho chinhu chakakosha pazvinhu zvese. Tine rabhoritari yekutsvagisa muJiangsu uye hebei.
Isu tinopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamitengo yemakwikwi muChina. Vose vatengi vanogamuchirwa kuti vatitumire mibvunzo uye zvinyorwa.
Minimum Order Yakawanda
Usatombo kendenga pamusoro peiyo shoma odha uwandu, yedu yepasi yekuraira huwandu i1 gramu kana zvishoma.
Kurumidza kuita. Isu tinovimbisa kupindura mukati memaawa makumi maviri nemana kusanganisira mazororo.
Kufambisa nekukurumidza uye kwakachengeteka kuratidza kuburitsa
Isu tinovimbisa kutumira chigadzirwa uye nekupa iyo yekutevera nhamba mukati memazuva matatu ekushanda. Uye isu tichazvitumira kuburikidza nemakambani akasiyana emakambani zvinoenderana nenyika yekuenda / dunhu.